दमौली, भदौ २८ गते । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत तनहुँको आँबुखैरेनीमा रहेको ऐनापहरा झरना सर्वसाधारणको आकर्षणस्थलका रुपमा विकास हुन थालेको छ । आँबुखैरेनी गाउँपालिका वडा नं २ र ४ को सिमानामा पर्ने उक्त झरना सर्वसाधारणको आकर्षणस्थलका रुपमा विकास हुन थालेको हो । राजमार्गसँगै जोडिएका कारण पनि यात्रा गर्ने हरेक सर्वसाधारण झरनामा पुग्ने गरेका छन् ।
तनहुँको व्यास नगरपालिका–४ का सुदिप पौडेलले ऐनापहरा महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य रुपमा विकास हुन थालेको सुनाउनुभयो । त्यस क्षेत्रमा पार्किङको समस्या देखिएकाले गाउँपालिकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । निजी सवारी साधनमा राजमार्ग हुँदै यात्रा गर्ने अधिकांश सर्वसाधारण झरनामा केही समय भुल्ने गरेका छन् ।
सर्वसाधारणको चहलपहल बढेपछि यहाँका स्थानीयवासीलाई आयआर्जनको माध्यम पनि भएको छ । पानी, चाउचाउलगायतका खाद्य पदार्थ बिक्री वितरण गरेर स्थानीयवासीले आम्दानी गर्न थालेका छन् । ऐनापहरा झरनालाई व्यवस्थित बनाउन डिपीआर निर्माण गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद पोख्रेलले जानकारी दिनुभयो । यस ठाउँलाई व्यवस्थित गर्न डिपीआर अनुसार रु. दश करोड बजेट आवश्यक पर्छ । गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा यस ठाउँका लागि रु. ३० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
रु. १० करोडको बजेटमा संरचना निर्माण गरिने पोख्रेलले बताउनुभयो । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ३० लाख बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । डिपीआर अनुसार यस ठाउँमा बुद्धको मूर्ति, रेलिङ, पार्किङलगायतका संरचना निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।